यदि जानाजान को’रोना फैलाएको पाइए चीनले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ, ट्रम्पले चीनलाई दिए यस्तो क’डा चे’तावनी ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/यदि जानाजान को’रोना फैलाएको पाइए चीनले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ, ट्रम्पले चीनलाई दिए यस्तो क’डा चे’तावनी !
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रम्पले को’रोना भा’इरस म’हामारीका लागि चीन जिम्मेवार देखिए उसले त्यसको परिणाम भो’ग्ने चे’तावनी दिएका छन्। ‘यदी त्यो ग’ल्ती थियो, त्यो ग’ल्ती हो। तर, उनीहरू यसबारेमा जानकार थिए भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्नेछ’, ट्रम्पले आफ्नो नियमित ब्रिफिङमा शनिबार भने। सो ब्रिफिङमा उनले अमेरिकाले के कदम चाल्छ भन्ने बारेमा भने केहि बताएनन्।
यसअघि बेलायतले पनि चीनले को’रोना भा”इरससम्बन्धी ‘क’डा प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने’ बताएको थियो। ट्रम्प र वरिष्ठ सहयोगीहरूले चीन को’रोना भा’इरसका बारेमा पारदर्शी नभएको भन्दै उसको तीखो आ’लोचना गर्दै आइरहेका छन्।यसै साता ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन चीनको प’क्षपाती भएको भन्दै उसलाई दिने अमेरिकी सहयोग रोकेका छन्। विश्वका यी दुई ठूला अर्थतन्त्रबिच को’रोना भा’इरसलाई लिएर पटक-पटक सार्वजनिक रुपमै आ’रोप-प्र’त्यारोप हुँदै आएको छ।
ट्रम्पले सुरुमा को’रोना भा’इरसमा चीनले गरेको नियन्त्रण प्रयासको खुलेर तारिफ गरेका थिए तर पछि उनी र उनका सहयोगीहरूले यसलाई ‘चिनियाँ भा’इरस’को उपनाम दिएर वि’वाद निम्त्याएका थिए। दुबै देशबिच गत वर्ष केही समय चलेको व्यापारयु’द्धपछि कृषि व्यापारका बारेको भएको पहिलो चरणको सहमतिलाई उल्लेख गर्दै ट्रम्पले ‘उनीहरूले यस्तो गर्दासम्म’ चीन-अमेरिका सम्बन्ध राम्रो भएको बताए।
उनले को’रोना भा’इरसको म’हामारी ‘भु’लवश’ नियन्त्रण बाहिर गएको थियो वा जानाजान गरिएको थियो’ भन्ने अहिलेको प्रश्न रहेको भनाइ राखेका छन्। यी दुईबिच ठूलो अन्तर छ’, ट्रम्पले भने। ट्रम्पले वुहान भाइ’रोलोजी प्रयोगशालाका बारेमा यसैसातामा अमेरिकी टेलिभिजन फक्स न्यूजले देखाएको रिपोर्टलाई उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन्। फक्सले यसै साता चीनले भा’इरसको क्षमता र त्यससँग ल’ड्नसक्ने आफ्नो क्षमता परीक्षण गर्न भाइरस फैलाएको रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो।
ट्रम्पले आफ्नो सरकारले को’रोना भा’इरस चीनको प्रयोगशालाबाट फैलाइएको हो की होइन भन्ने बारेमा खोजी गरिरहेको बताए। शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा ट्रम्पले पुनः भा’इरसका कारण चीनमा भएको मृ’त्युमाथि उसले शुक्रबार पेस गरेको नयाँ तथ्यांकमा पनि शं’का व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार चीनले वुहानको मध्यशहरमा १३ सय मानिसहरू को’रोनाबाट मरेको जानकारी दिएको छ। उसले वुहानमा म’रेका यी मानिसहरू पहिलो नगनिएको बताएको थियो। यसैगरी चीनले मृ’तकसंख्या ढा’कछेप गरेको भन्ने आ’रोपको खण्डन पनि गरेको छ।
अस्पतालमा पेट्रोल बम प्रहार : बिरामीको भागाभाग